Archive – Welcome
पछिल्ला केही दशकको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली समाजले विकास पूर्वाधार, सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र राजनैतिक चेतनाका हिसाबले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । यतिमात्रै होइन, कानुनी प्रबन्धका हिसाबले समेत नेपाल संसारका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि छ । नेपालको संविधानको भोल्युमले पनि बताउँछ कि त्यहाँ धेरै कुरा समेटिएको छ । नागरिक सरोकारका हरेकजसो विषयमा कानुन बनेका ... Read more...
मनबहादुर मुखियाले लेखेको नाटक ‘अनि देउराली रुन्छ’ दार्जिलिङमा सन् १९७२ मा पहिलो पटक मञ्चन भएको थियो । यो नाटक सन् १९७६ मा काठमाडौंमा पहिलो पटक प्रदर्शन भयो । त्यसपछि ४ वर्ष हरेक पटक १–१ महिनासम्म मञ्चन भयो । २०७४ साल जेठमा पुनः काठमाडौंको शिल्पी थिएटरमा मञ्चन भयो । शिल्पी समूहले आफ्नो कृति पुनर्मञ्चन गर्ने ... Read more...
पंक्तिकार निजामती सेवामा आबद्ध व्यक्ति हो । यो गौरव गर्नुपर्ने विषय होइन, न त यसमा ग्लानी गर्नु नै जरुरी छ । निजामती सेवा जीवन गुजाराका लागि सम्भावित हजारौं विकल्पमध्येको एक हो । पंक्तिकार त्यही बाटोमा लागेको मात्र हो । हिजोआज अधिक प्रयोग हुने एउटा शब्द छ, ‘राष्ट्र सेवक’ । यदि राष्ट्र सेवा पेशा हो ... Read more...
नाटक र नाट्य परम्परा नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो । नेपालमा मनाइने विभिन्न मौलिक चाडपर्व र उत्सवमा समेत नाट्य कौशल प्रदर्शन हुने गर्दछ । इतिहासअनुसार नाटक निकै पुरानो विधा हो । पंक्तिकार नाटक विधाको विज्ञ होइन । एक दर्शकको दृष्टिकोणबाट नेपाली रङ्गमञ्चको विषयमा टिप्पणी गर्नु यो आलेखको ध्येय हो । पृष्ठभूमि र विकास नेपालमा वि.सं. ... Read more...
वर्षौंपछि अचानक आयो भुइँचालो र,हल्लाइदियो पूरै देश छिनभरमै सिध्यायो महल, अहम् र अहंकारहरु । सुतेकाहरु जागे जागेकाहरु हिंडे हिंडेकाहरु दौडिए अस्तित्वको खोजीमा फेरि एकपल्ट संसारले सम्झियो कच्चा रहेछ जिन्दगी साच्चै सस्तो रहेछ जिन्दगीको मुल्य । सरकार पनि त झस्कियो जसोतसो सम्हालियो र, जोगायो आफुलाई । गुमाएर पनि घर–बास र आफ्नाहरु पुछेर आँसु भुलेर पीडा सम्हालियो देश मुर्झाएन । भुइँचालो रोकियो तर, बारम्बार हल्लिरह्यो सरकार र, समाइरह्यो भित्तो अस्तित्व रक्षाका खातिर । अचेल फेरि बेमौसमी कम्पनले हैरान छ देश छिनछिनमा अस्तित्वको हिसाब गर्दै समाइरहेछ भित्तो भुइँचालो ... Read more...
नेपाल राज्य अजीव आकारको छ । यो कहिलेकाहीं अक्टोपसजस्तो देखिन्छ । यहाँ सरकार छ । प्रशासन संयन्त्र छ । निजी क्षेत्र छ । नानाथरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था छन् । राज्यको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, सातौं… अनेक अंगहरु छन् । बडा विचित्र छ । जब संकट आइपर्छ, सबैले राज्य र सरकारको खोजी गर्छन् । यतिसम्म ... Read more...
तिम्रो क्यानडाको पिआर सपना तिम्रो बाबुको गैरीखेत बिराएर धान रोप्ने सपना यी दुई सपनाको आयतन कसरी समान हुन सक्छ ? तिमीलाई देशले केही दिन नसकेको पिरलो रहर होइन, बाध्यताले विदेशिनु परेको पिरलो बाबुलाई दमको पिरलो दम र डिभी, रोपाईं र पिआरलाई कसले जोख्न सक्छ एउटै तराजुमा ? कसले भन्न सक्छ कुनचाहिँ मुल्यवान ? विदेशिनु अघिको तिम्रो सपना बाबुको सपना भाई-बहिनीको सपना इष्टमित्र र साथीभाइको सपना छिमेकी र ... Read more...
कि यो शहरको दास हुनुपर्छ कि त तिमी बदमास हुनुपर्छ शहरमा शहरकै चालमा हिँड अन्यथा अवकाश हुनुपर्छ यौटा सज्जन अनि दुर्जनको यहाँ त सहवास हुनुपर्छ सपना देख्दै खुशी फुलेका कति दिन त हतास हुनुपर्छ यो गाउँले भन्दा फरक नभए तिमीले पनि निराश हुनुपर्छ (मिर्मिरे मिडिया क्लब स्मारिका-५ मा प्रकाशित) Read more...
सर, वी विल नेभर बी टुगेदर
एकपल्ट गाउँलेहरुले ‘ससुरालीले सूर्य चिन्हमा छाप लगाउन अह्राएकाले हार्न सकेन’ भनेर काकाको बारेमा कुरा गर्ने गरेको सुनेको थिएँ । खासमा उहाँले सूर्यमा नै छाप हान्नुभएको हो वा त्यसो गर्नुभएन मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । तर त्यही खासखुस र खिसीटिउरीले नै मेरो राजनैतिक चेतनाको क्षितिज उघ्रिएको थियोे । गाउँमा रुख, सूर्य र हलो चिन्हको विषयमा ... Read more...
हामी सङ्घारमै हुन्छौं – कविता
स्वतन्त्रता खोज्दै सडकमा निस्कन्छन् रुबिन र छायाँदेवीहरु उता, यौटा राष्ट्रवादीको शव पार्टीको झन्डाले ढाकिएको हुन्छ मोक्षप्राप्तिको लागि तीर्थवास बस्छन् हजुर्बा-हजुरआमाहरु अनि, चन्द्रग्रहण लाग्दा चमारले चन्द्रमालाई घेरेको भन्छन् हाम्रो बुझाइमा प्रश्नचिन्ह लगाउँदै चन्द्रमामा बस्ती बसाउने प्रयत्न गर्छ नासाले ठीक त्यही मोडमा ‘अन्तिम भोज’ लेख्छन् विजय मल्लहरु तर हामी भने विज्ञान र पुरातन संस्कृतिको दोहोरो छायाँमुनि आफ्नै झुपडीको सङ्घारमै हुन्छौं हो, हामी झुपडीको सङ्घारमै हुन्छौं मिर्मिरे मासिक, अङ्क २५१ Read more...
विदेशिनुअघिको तिम्रो सपना
इष्टमित्र तथा साथीभाइको सपना
छिमेकी र तिम्रो गाउँको सपना
तिम्री आमाको सपना र
तिमी कुन सपनाको
बाटो पछ्याउँदैछौ ?
[बाह्रखरी डटकममा पढ्नुहोस्]
स्कुल पढ्दासम्म ज्ञानु सरले ‘बिहेवारी बीस पारि’ भनेर सिकाउँथे । यसपालि उनैले सिकाए, “आखिर एकपटक गर्नैपर्ने काम हो, किन ढिला गर्नु ! छोरी भएपछि अर्काको घरमा जानु नै पर्छ ।” जुनुको उमेर १८ पुगेको बताउने सल्लाह बा र ज्ञानु सरले गरे ।
स्कुलमा सामाजिक र जनसंख्या शिक्षा पढाउने ज्ञानु सरको यो दोस्रो अवतार थियो । जुनुलाई सरको कुरा पटक्कै मन परेन । उसले सोधी, “सर तपाईंले स्कुलमा पढाउने र घरमा गर्ने कुरामा किन यति धेरै फरक ?”
सरले निन्याउरो मुख लाएर उत्तर दिए, “स्कुलमा कोर्सका कुरा हुन्छन् । पाठ्यक्रममा जे–जे लेखेको छ त्यही पढाउनुपर्छ तर घरमा व्यवहार प्रमुख हुन्छ । पाठ्यक्रममा लेखेका कुराले घर–व्यवहार चल्दैन ।”
घरबहालको बेथिति, डेरावालको बिजोग
[बिजपाटी डटकममा पढ्नुहोस्]
आजको मितिमा कसैले काठमान्डु बेथितिको केन्द्र हो भन्छ भने त्यो अत्युक्ति हुँदै होइन । यहाँ राज्यका यतिविधि विद्वान, स्रोतसम्पन्न र जानेबुझेका मान्छेहरु एकैठाउँ नथुप्रिएको भए काठमान्डुको यो गति हुने थिएन भन्ने पंक्तिकारको मत हो । सबैखालका बुज्रुक/उपबुज्रुक, धनीमानी र गन्यमान्यको उपस्थितिले जन्माएको अस्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा बेथितिको मुख्य कारक तत्व हो । काठमान्डुले जन्माएको बेथितिको बारेमा बहस गर्नुपर्ने अनेक पाटाहरु छन् । यद्यपि यो आलेख काठमान्डुमा आश्रित निमुखा, श्रमजिवी र विद्यार्थी वर्गले घरबहालको बेथितिका कारण झेल्नुपरेको सास्तीमा केन्द्रित छ ।
छ्या ! तीज गीत
[म्युजिक खबर डटकममा पढ्नुहोस्]
तीजको गीतलाई महिला–पुरुषको संवादको शैलीमा ढालेर गाउने परिपाटीको सुरुवात लोकगायक प्रजापति पराजुलीले गरेका हुन् । त्यसअघि तीज गीत र नाचगानमा पुरुषको भूमिका ’सेकेन्डरी’ हुन्थ्यो । पराजुलीको शैलीलाई पछ्याउँदै पुरुषोत्तम न्यौपाने लगायत उनका समकालीनले तीज गीतमा नयाँ नयाँ थेगोको प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । यद्यपि त्यो शैली आफैमा नराम्रो होइन । त्यही शैलीलाई पछ्याउने नाउँमा दोस्रो पुस्ताले तीज गीतलाई हदैसम्म विकृत बनाउँदै लगेको छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा तीज गीत गायनमा पुरुष कलाकारको ’तँछाड् मछाड्’ देखिन्छ । तीज गीतमा अश्लिलता भित्र्याउने र त्यसलाई बढावा दिने काम दोस्रो पुस्ताका पुरुष कलाकारहरुले गरिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । आफुले गर्दै नगरे पनि हुने काममा अघि सर्नु र त्यसको मर्यादा राख्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।
विपत्ति र राहतको रोइलो
[नेपाल तारा डटकममा पढ्नुहोस्]
[खबरडबली डटकममा पढ्नुहोस्]
अपवाद बाहेक मान्छेहरुको नाम र काम मिल्दैन । बोली र व्यवहार मिल्दैन । नेपाली धनबहादुर, मनबहादुर र कुबेरहरु नामले अर्थ्याएको भन्दा ठीक उल्टो अवस्थामा हुन्छन् । त्यसैले नयाँ शक्तिले नयाँ तरिकाले नै काम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
उच्च प्रशासक र विज्ञ व्यक्तिको छवि बनाएका रामेश्वर खनालले समेत कुबेर खड्का नाम भएको व्यक्ति साँच्चिकै कुबेर हो भन्ने ठान्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । आशा गरौं, उनले कुबेर ठानेको व्यक्ति गाउँको सबैभन्दा धनी व्यक्तिसम्म होस् । उसको घर बलियो होस् । केही वर्षपछि ‘रातो स्टिकर’ लगाएर बाहिरिनु नपरोस् ।
उर्वशी अनि ‘सरकारको सिन्दुर’
[सेतोपाटी डटकममा पढ्नुहोस्]
नेपाली कांग्रेसको कार्यभार
[हिमालय टाइम्समा पढ्नुहोस्]
एमाओवादी नेता राम कार्कीको तर्क मान्ने हो भने कम्युनिस्टको ब्याड राख्नुपर्छ तर कांग्रेस जहाँ छरेपनि उम्रन्छ । यति सजिलै जहाँ छरेपनि उम्रिने कांग्रेसलाई बिस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो ? कमजोरी कसको हो ? अब कांग्रेस नेताहरूले यी प्रश्नको त्यसको निदान खोज्नुपर्छ । त्यसको लागि उचित मौका आएको छ ।
पोलिटिकल वा पारिवारिक ‘लिगेसी’, फलानो–ढिस्कानो दा’, फलानो गुट वा झुण्डलाई प्राथमिकता नदिएर पार्टी आफ्नो र आफू पार्टीको हुँ भन्ने मानसिकतामा कांग्रेस राजनीति गर्नेहरूमा होस् । यदि छैन भने पार्टीले संस्थागतरूपमै त्यसको विकासको लागि पहल गरोस् । नेतृत्वले आफ्नो र अर्को को हो भन्ने अंकगणितको बहीखाता बन्द गर्ने आँट गरोस् । कहिल्यै ढुलमुल नगर्ने बहुलवाद, कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक विचारप्रति आस्थावान् ‘ओपन मास’ ले कहिल्यै कांग्रेसलाई छोडेर जाँदैन ।